UJeff Goldblum angathanda ukwenza enye iMovie 'yokubhabha' - iHorror
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo UJeff Goldblum angathanda ukwenza enye iMovie 'Fly'
Iindaba ezothusayo zoLonwabo
UJeff Goldblum angathanda ukwenza enye iMovie 'Fly'
by UMichael Carpenter Juni 17, 2018
ibhalwe ngu UMichael Carpenter Juni 17, 2018
Wonke umntu uthanda ukuthanda uJeff Goldblum, kwaye kutheni kungenjalo, uyintsomi. Abathandekayo bobabini ngenxa yokusebenza kwakhe ngamandla kunye nokufana kwakhe ngokubanzi, iGoldblum inesihogo esinye somsebenzi, kubandakanya neefilimu ezahlukeneyo Ipaki yeJurassic, Usuku lwenkululeko, kwaye UTro: uRagnarok.
Ukoyikisa abalandeli nangona kunjalo, uGoldblum uya kuhlala ekhunjulwa ngendima yakhe ekhokelayo kuDavid Cronenberg omangalisayo ngo-1986 Bhabha. Ifaka ezinye zezona ziphumo zibalulekileyo zimbali, I-Fly Ingqina ukuba ukubuyisa ngamanye amaxesha kulawula.
Kwifilimu, uGoldblum ngokuqinisekileyo udlala isazinzulu uSeth Brundle, owenza iseti yeeportportation pods ezijongeka njengeziyinzululwazi. Ngelishwa, ugqiba ukudibanisa i-DNA yakhe kunye nempukane enobukrakra, ekhokelela kukoyikeka kubo bonke ababandakanyekayo.
Nakuba impukane Umyili weziphumo uChris Walas uya kukhokelela kwisidima esaneleyo esifanelekileyo nge-1989's Inqwelomoya II, IGoldblum kutsha nje yazisa ngexesha lodliwanondlebe kunye Ukucekisa Igazi uya kuzimisela ngakumbi ukuvela kumtsha impukane isavenge.
Ngelixa uSeth Brundle ngekhe asinde Bhabha, UGoldblum uthi angakuvuyela ukudlala isihlobo esasingekakhankanywa ngaphambili saseBrundle. Ukujonga ukuba yayinjani iGoldblum enkulu Bhabha, abalandeli abathandabuzayo bangabuza nantoni na eyenziweyo ukumbuyisela kwifranchise.
Nangona kunjalo, kukho ukubanjwa. Esona sizathu siphambili sokuba uJeff Goldblum afune ukubuya lithuba lokusebenzisana neCronenberg kwakhona, kwaye sele kudlule iminyaka ukususela oko uCronenberg wenza ifilimu eyoyikisayo. Okwangoku, ngumbono omnandi ukucinga, kwaye sonke sinokunqwenela ukuba kwenzeke.
UJames Wan uvelisa i-'Arachnophobia 'Remake
UFede Alvarez uthi uyakwenza enye into 'yokufa embi' ukuba i-Uruguay iphumelele iNdebe yeHlabathi